IFactory yeNkqubo yokuTyelwa kweChocolate, uMboneleli weNkqubo yokuTyalisa iChocolate - Umatshini we-LST
Inkqubo yokutya yetshokholethi lelona nqanaba libalulekileyo kumgca wokuvelisa itshokolethi yonke, sisixhobo esiyimfuneko kwimveliso yetshokholethi.
Yintoni inkqubo yokutya yeTshokholethi?
Ngokwenyani, xa siqala iprojekthi yemveliso yetshokholethi, into yokuqala kukuqinisekisa kunye nomthengi "Ngaba ufuna inkqubo yokutya?" kwaye ke sinokuthetha ezinye iinkcukacha kunye nomthengi, njengoko inkqubo yokondla itshokolethi sisixhobo esiyimfuneko kuyo yonke imveliso. .
Inkqubo yokondla itshokholethi ibandakanya iindidi ezimbini zoomatshini: eyokuqala yitanki ephethe itshokholethi; itanki yethu yokubamba itshokolethi ikwimveliso yetshokholethi eyimfuneko, ikakhulu isetyenziswa emva kokugcinwa kobushushu besiraphu yetshokolethi echanekileyo, iyanelisa imveliso yetshokholethi imfuneko yetekhnoloji. Ilungelelanisa imveliso eqhubekayo yokucela.ibandakanya itanki yokubamba itshokolethi kunye neenxalenye zempompo ye-twp, umthamo wetanki ozikhethelayo yi-500L, 1000L, 2000L; kwaye amandla yi-7KW, 7.5KW kunye ne-9 KW, ngokubanzi, siya kucebisa umthamo ofanelekileyo osekwe kwisicelo sethu somthamo wemveliso yabathengi, Okukhona umthamo wemveliso mkhulu, kokukhona umthamo omkhulu. impompo iyafana nokubamba itanki, siya kuthelekisa impompo efanelekileyo yetanki yokubamba itshokolethi.
Inxalenye yesibini yitanki yokunyibilika kwamafutha, itshokolethi yethu enyibilikayo kunye netanki yokuxuba ukusuka kwi-75kg ukuya kwi-6000kg, kwaye sinokwenza ngokukodwa ngokweemfuno zakho ezizodwa.
Itanki yensimbi engenasici inesandwich kunye nokulawula ubushushu obuqhubekayo, kunye nokuxuba okunamandla kunye nesixhobo se-scraper ngaphakathi.
Isetyenziselwa ntoni inkqubo yokutyisa itshokolethi?
Itanki yokubamba itshokolethi kukugcina ubunzima betshokholethi egayiweyo enobushushu obungaguqukiyo obulawulwa yinkqubo yokulawula ubushushu obuzenzekelayo, isetyenziswa ikakhulu njengesitya sokugcina ubushushu ukugcina isiraphu yetshokholethi emva kokusila, ukuze kuhlangatyezwane nemfuneko yetekhnoloji kunye nesicelo esiqhubekayo sokuvelisa.
Itanki yokunyibilika kwamafutha ingasetyenziselwa ukunyibilika, ukugcina nokugcina ubushushu kwitshokolethi, i-axunge kunye nezixhobo zokugquma ezifanayo. Amanye amacandelo aquka isixhobo sokufudumeza sangaphakathi samanzi, angasetyenziselwa ukufudumeza kwangaphandle kotshaba, ukugcinwa kobushushu kunye nokugquma.
Zeziphi iimpawu eziphambili zenkqubo yokondla itshokolethi?
Itanki ephethe itshokholethi: Ukufakwa kwebhatyi ephindwe kabini/Inkqubo yokuBoleka kwaManzi ashushu/Udidi lweSango lokuNxulumanisa iPaddle/Intsimbi egcweleyo engama-304
Itanki yokunyibilika kwamafutha:Isixhobo sokufudumeza i-Interlayer/INkqubo yokuBoleka kwaManzi ashushu/Itanki ephezulu ye-SS
I-Fat Melting Tank